Ra’iisul wasaare Kheyre oo dib u dhigay ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo dib u dhigay ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub (AKHRISO)
Inkastoo maalmihii ugu dambeysay si weyn loo hadal haayay in maanta oo Arbaco ah lagu dhawaaqi doonno golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hadane waxaa soo baxaaya warar sheegaya inuu arrinkaasi dib u dhac ku yimid.
Ilo xog-ogaal ah oo ay warbaahinta Bulshoweyn ka heleyso xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegaya in qorshaha ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee maanta dib uga dhacay islamarkaana lagu dhawaaqi doonno todobaadka soo socda.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegayaa inuu weli ku mashquulsan yahay la-tashiyadda uu la leeyahay siyaasiyiinta iyo odayaal dhaqameedyadda beelaha Soomaaliyeed, maadaama ay beel kasta doonayso inay iska dhex aragto xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doonno.
Dhinaca kale, warar madax banaan oo aynu heleyno ayaa inoo xaqiijiyay in golaha wasiirada cusub ee lasoo dhisi doonno tiro ahaan ay noqon doonaan 20 illaa 25 wasiir, kuwaas oo isugu jira siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo sidoo kale shaqsiyaad ku cusub masraxa siyaasadda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa haatan looga fadhiyaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu kusoo magacaabo xukuumad tayo leh oo la jaan-qaadi karta xaaladaha cakiran ee ka taagan dalka Soomaaliya.